ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: April 2014
ဒီနေ့မှာ ရှင်သန်နေကြတဲ့သူတွေ မနက်ဖြန်မှာ ဘာဖြစ်ကြမလဲလို့ ရှင်တို့လဲ မသိဘူး ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ မသိခဲ့ ဘူး။ လောကဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကျရာနေရာကနေ ပြောင်မြောက်လှပအောင် အသုံးတော်ခံ နေကြရတာ မဟုတ်လား။ တစ်ကယ် လို့ မနက်ဖြန်မှာ ဘာဖြစ်မလဲ ကျွန်မသာကြိုသိနိုင်ခဲ့ရင် အဲဒီနေ့က ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်လေးက ဘယ်လောက်ပဲ အကူ အညီတွေတောင်းနေနေ “ဟင့်အင်း” လို့ တစ်ခွန်းတည်း ငြင်းမိမယ်။ ပြီးရင် ကျွန်မအိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက်ဘူး။ အိပ်ခန်းတံခါးကို လုံအောင် သော့ခတ်ထားမယ်။
သူမဘယ်လိုပင်တွေးပြီး စိတ်ကောက်နေပါစေအုန်းတော့ နောက်နေ့မှ ပြန်ချော့မယ်။ ပြန်ပြင်ဆင်ခွင့် မရနိုင် တော့မယ် အတိတ်ကပုံရိပ်ဟောင်းတွေကို ကျွန်မဖျက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အတွေးထဲ သမိုင်းထဲ နှလုံးသားထဲ မေ့ လို့ ရနိုင်သမျှ မေ့ထားလိုက်ချင်မိတယ်။ ခုတော့ ကျွန်မက မနက်ဖြန်တွေ အနာဂတ်တွေကို ကြိုတင်မ သိရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်။ သူငယ်ချင်းလေး သီဟန် စိတ်ကောက်တော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူတွေ့ချင်တဲ့ သူရဲ့ အိမ်ကို သွားခေါ်ပေးခဲ့တယ်။ ကြောက်တတ် စိုးရိမ်တတ်လွန်းတဲ့ ကျွန်မက စက်ဘီးစီးတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် လူတွေအရမ်း ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါ စက်ဘီးကတစ်ရမ်းရမ်းဖြစ်လာတတ်တာ။ ဒါပေမယ့် သီဟန် က “အောင့်ရဲ့ စက်ဘီးနောက်ကထိုင်ခုံမှာ နင်အပါအ၀င် ဘယ်မိန်းကလေးမှ ထိုင်လာတာ ငါမကြိုက်ဘူးလို့ ” အစပ်အဆက်မရှိ ဆိုလာတဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်မကိုယ်တိုင် စက်ဘီးနင်းခဲ့ရပြီ။
တစ်ကယ်ဆို သီဟန်နဲ့အောင် ကချစ်သူတွေပဲ။ သူတို့ဆုံတွေ့ဖို့ရာ ကျွန်မက ခြေမြန်တော်တပ်သားပေါ့။ အောင့် ရဲ့ အိမ်ကလည်း သီသီဟန် ဆိုရင် လှည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေက ချမ်းသာတော့ သီဟန် ကမောက်မာတယ်တဲ့။ ရိုင်းတယ်တဲ့။ ကျွန်မစိတ်ထင် သီဟန်က ကလေးဆိုးဆိုးတာပါ။ ဘယ်သူတွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုပဲ မောက်မာခဲ့ မောက်မာခဲ့ ကျွန်မကိုချစ်တတ်လွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးပါ။ သူတို့သွားလေရာကို ကျွန်မကနောက်ကနေလိုက်ရတယ်။ တစ်ကယ်ဆို မလိုက်ချင်ဘူး။ သို့ပေမယ့် သူငယ်ချင်းလေး ရွှေစိတ်တော် ညိုမှာမို့ နောက်တော်ပါးက အမြဲပါခဲ့ရတဲ့သူ။
အောင် စပြီးချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောခဲ့တာ ကျွန်မကိုဆိုပေမယ့် သီဟန်အသည်းနှလုံးထဲ ဘာရှိနေတယ်ဆိုတာ ကို မြင်တတ်တဲ့ ကျွန်မက “ငါ နင့်ကို မချစ်ဘူး ” လို့ တစ်ခွန်းတည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြန်ဖြေခဲ့တာမဟုတ်လား။ အေးလေ ဒါတွေထားပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ တွေးတာကောင်းပါတယ်။ မရိုးတာက သီဟန်ပဲ။ အောင်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက် ပိုင်း ကျွန်မကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေကို မကြိုက်ဘူး။ တစ်ကယ်လို့သာ အဲဒီနေ့က အောင့် ရဲ့ စက်ဘီးနောက်ကနေ သာထိုင်လိုက်ခွင့် ရလိုက်မယ်ဆိုရင် ခုလိုမျိုး ရင်နာစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးဘေးကနေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကုန်ကားကြီးတစ်ခုဖြတ်မောင်းသွားတယ်။ ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီး လေးက ခါကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဘေးကလူတွေရဲ့ လန့်ပြီးအော်သံတွေ ဆူညံသွားတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲရဲ နီတဲ့ သွေးတွေ ဖုံးနေပေမယ့် ဂရုမထားအားဘူး။ ကားဘီးအောက်ထဲက အောင့် အဖြစ်ကို ရင်ထဲမှာမချိဘူး။ မမြင်ရက်ဘူး။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မငိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အသံတွေထွက်မလာဘူး။ ကျွန်မရဲ့ မှတ်ညဏ်ထဲမှာ အောင့် ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးက ဒီနေ့ အထိ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနေရာ ယူထားစဲ။
ကျွန်မကြောက်တတ်မှန်းသိလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးနဲ့ ကုန်ကားကြီးကြားထဲကို သူ့စက်ဘီးနဲ့ အတင်းဇွတ်တိုးပြီး ၀င်လာတဲ့ အောင်။ ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးကလဲ ခါကနဲ အဖြစ် သူ့စက်ဘီးနဲ့ ချိတ်ပြီး ကားအောက်ထဲ ရောက်သွားရှာတာ။ ဘေးလူတွေပြောတာပဲ။ တစ်ကယ်ဆို ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးလဲ ကုန်ကားကြီးဘက်လဲကျတာတဲ့။ အောင် ကသာ သတိရှိရှိနဲ့ ကျွန်မရဲ့ စက်ဘီးကို အခြားတစ်ဖက်ကိုသာ မတွန်းထုတ်ခဲ့ရင် နှစ်လောင်းပြိုင်တယ်တဲ့။ ကျွန်မက အဲဒီနေ့က နှစ်လောင်းပဲဖြစ်လိုက်ချင်တာ။
အောင့် ရဲ့ အသုဘကို လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာ။ ဆေးရုံကဆင်းတော့ မိဘတွေ တားနေတဲ့ ကြားထဲက သီဟန် ဆီကို သွားခဲ့တယ်။ နင် အရမ်းရက်စက်တာပဲဟာ.
“မိဆက် နင့်မျက်နှာ ငါမကြည့်ချင်ဘူး။ လာစရာလဲ မလိုဘူး။ နင်လဲငါ့လိုမျိုးပဲ ချစ်သူနဲ့ သေကွဲ မကွဲရပါစေနဲ့ လို့ ငါဆုတောင်းလိုက်တယ်။ နင့်ကို အသက်ပေးပြီး ချစ်ရလောက်အောင် မိုက်မဲလွန်းတဲ့ ငါ့ချစ်သူကိုလဲ ငါမုန်းတယ်။ ”
အဆုံးသတ်မှာတော့ ခုလိုဒဏ်ရာတွေ တစ်နင့်တစ်ပိုးနဲ့ မြို့ငယ်လေးကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေက အနာတရတွေ များလွန်းတဲ့ ကျွန်မအတွက် နေရာသစ် လူသစ် စိတ်သစ်ဆိုတဲ့ ဘ၀လေးတစ်ခုကို မွေးဖွားပေးခဲ့ကြတယ်။ နေရာသစ်မှာ အတန်အသင့် ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးပြကြီးမှာ နေ့တိုင်း ထိတွေ့နေရတာက ဘတ်(စ်)ကား။ ကားတွေမြင်တိုင်း အသည်းထိတ်လွန်းတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ မဟာစွန့်စားခန်းပေါ့။ သို့ပေမယ့် ဘ၀အရေးမဟုတ်လား။ အံကိုခဲပြီး မျက်လုံးစုံမိတ်လို့ စီးရတာပဲ။
ဒီလိုကြောက်တတ်လွန်းလို့လဲ ဘို နဲ့ကျွန်မဆုံဆည်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်မှာ လူတွေများလွန်းတယ်။ ၀ှီးကနဲ ကျွိကနဲ ထိုးထိုးရပ် မနားတမ်းလူတွေ ထိုးသိပ်ထည့် ပြီးရင် ၀ူးကနဲမောင်းမောင်းထွက် သွားတဲ့ ကားတွေကြောင့် သာမန်နေ့တွေထပ် ကျွန်မ အကြောက်ပိုနေခဲ့တယ်။ ညနေ ၅ နာရီဆိုထဲက စောင့်လိုက်တဲ့ ကား ည ၇ နာရီသာထိုးရော ကားပေါ်မရောက်သေးဘူး။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလဲ တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်လာတယ်။ ပြီး မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တို့ ၀ိုင်းလာခဲ့တယ်။ TAXI ငှားပြီးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ TAXI တားတယ်။ မရပါဘူး ခရီးသည်တွေ ပါပါလာတယ်။
ကားမှတ်တိုင်က လူတစ်ချို့ကလဲ ကျွန်မကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်ဖြစ်လာပြီ။ ကြောက်လိုက်တာလေ ဒူးတွေ ညွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသလားမှတ်ရတယ်။ ကျွန်မဘေးနားက ယောက်ကျားတစ်ယောက် TAXI တားတယ် ကံအားလျော်စွာပဲ ရသွားတယ်။ ကားတံခါးကိုဖွင့်ရင်း “ဟေ့ တက်လေ မင်းအတွက် တားပေးတာဆိုပြီး ” ပြောလာတော့ အံ့အားသင့်လို့။ ၀မ်းလဲသာသွားတယ်။ သို့ပေမယ့် ခြေထောက်တွေက လှုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အခြေအနေကို သူသဘောပေါက်သွားပုံရတယ်။ ကျွန်မဘေးနားလာပြီး “ကိုယ်တွဲပေးမယ်နော် လာ..” ဆိုပြီး ကားပေါ်လိုက်တင်ပေးသည်။ ထို့နောက် စိတ်မချပုံနှင့် “ကဲ TAXI ဆရာရေ သူ့အရင်လိုက်ပို့ ဗျာ။ ပြီးရင် ကျွန်တော် “ ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင် လိုက်လာခဲ့သည်။
မထင်မှတ်မိတာက သူက ကျွန်မတို့ရဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာ နေထိုင်ခဲ့ဘူးပါသတဲ့။ ကျွန်မကိုလဲ အဖြစ်ဆိုးက လွတ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးဆိုတာ သူသိနေပါသတဲ့။ ဒါကြောင့် သူအကူအညီဝင်ပေးခဲ့တာပါတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို အဲဒီနေ့ က ကျေးဇူးတင်ခဲ့မိတာအမှန်။ ကျွန်မကို သနားတဲ့ စိတ်နဲ့ တစ်ချိန်လုံးကျွန်မဘေးမှာ ဖေးမပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မကလဲ သူသာကျွန်မဘေးနားမှာရှိရင် အရာအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရဲလာတယ်။ သူက ကျွန်မကို “လွန်းဆက်” လို့ခေါ်သလို ကျွန်မကလဲ သူ့ကို “ဘို” လို့သာ ခေါ်ခဲ့တယ်။
ရာသီတွေ နေ့တွေ နှစ်တွေ ပြောင်းလာတော့ အရိပ်ဆိုးကြီးဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပါးလွှာလို့ မေ့မေ့ပျောက် ပျောက်။ ဘို နဲ့ ကျွန်မနဲ့ကလည်း အပေးအယူမျှမျှ နားလည်မှုတွေလဲ အပြည့်အ၀။ ဘို ရဲ့ မေတ္တာရိပ်ဟာ ကျွန်မအတွက် အေးမြတယ်။ ဘို ကလည်း ကျွန်မကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မနားမလည်တာက ဘာဖြစ်လို့ များ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် လက်ထပ်ဖို့ကို အချိန်ဆွဲနေသလဲဆိုတာကိုပဲ။ ချစ်သက်တမ်း ၃ နှစ်ကျော်နေ တာတောင် ဘိုခုထိ လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းသေးဘူး။ ဘို့ အချစ်ကိုလဲ သံသယဖြစ်စရာ စိုးစဉ်းမျှ မရှိ။ မေမေ တို့ကလည်း မေးလှပြီ။
နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအရောက်မှာတော့ ဘိုရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကျွန်မတွေ့ခဲ့ရပြီ။ ဘို ရဲ့ မိဘတွေကို တွေ့လိုက်မှပဲ ဘို ဘာကြောင့် လက်ထပ်ဖို့ကို အချိန်တွေဆွဲနေခဲ့သလဲ ရှင်းလင်းသွားခဲ့ရတယ်။
“ကျွန်မကို ဘာလို့ ကြိုမပြောခဲ့ရတာလဲ ဘို”
“လွန်းဆက် စိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ပါ။ တစ်ကယ်ဆိုအိမ်ကို လာပြီး ညီမလေးသီဟန် ရဲ့ ရက်စက်တဲ့ စကားတွေ ကြားမှာ ချုံးပွဲချငိုနေခဲ့တဲ့ နေ့ထဲက ချစ်မိနေခဲ့တာပါ လွန်းဆက်ရယ်. ဘို တို့ အခက်အခဲကို တူတူကျော်လွှား ကြမယ် လေ”
ကျွန်မလဲ အားတင်းထားခဲ့ပါတယ်။ သီဟန် နဲ့ မတွေ့ခင် အချိန်ထိပေါ့။
“မိဆက် အတိတ်ရဲ့ အရိပ်ကို နင်မမေ့သေးဘူးလို့ ငါထင်တယ်။ နင်ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ နင့်ဘာသာနင်စဉ်းစား။ ငါတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးကိုတော့ သေကွဲကွဲအောင်ခွဲပြီး နင့်အလှည့်ကျ ချစ်သူနဲ့ပေါင်း ရွှေလက်တွဲပြီး ပျော်ပျော်ကြီး နေချင်လို့ ရမလား။ အေး..နင်နဲ့ငါ့အစ်ကိုလက်ထပ်တဲ့နေ့ဟာ ငါ့အလောင်းကို နင်မြင်ရတဲ့နေ့ပဲ. “
ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲ လောကကြီး။ နှစ်ဖက်မိဘတွေလဲ စကားပြောပြီးကြပြီ။ ဘို ကတော့ သီဟန်ကို ဂရုမစိုက်ဖို့ မိဘ တွေရဲ့ သဘောထားသာ အရေးကြီးကြောင်း။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ နားထဲမှာ သီဟန် ရဲ့ စကားသံက ပဲ့တင်ထပ်နေ တယ်။
“အေး..နင်နဲ့ငါ့အစ်ကိုလက်ထပ်တဲ့နေ့ဟာ ငါ့အလောင်းကို နင်မြင်ရတဲ့နေ့ပဲ.”
အဲဒီလို တစ်ကယ်ဖြစ်လာရင်ရော။ အောင့်ရဲ့ အလောင်းကိုမြင်ခဲ့ရတုန်းက ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်။ သီဟန် ကိုလဲ ဒီလို ထပ်မြင်ရရင် ကျွန်မရူးသွားလိမ့်မယ်။ ဘို ရယ် ကျွန်မရှင့်ကို ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ရင်ထဲက အကြောက်တ ရားကို နားလည်ပေးပါနော်။ အားလုံးနဲ့ ဝေးရာကို တိတ်တိတ်လေး ထွက်ပြေးမိခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ရေခြား မြေခြား ဘ၀တွေခြားနေတဲ့ နေရာမှာ တစ်ယောက်တည်း တိတ်တဆိတ် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။
ဘ၀ကို အပြေးတွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ ရတဲ့ မိန်းမ။ ကျွန်မလဲအပြေးတွေကို ရပ်လိုက်ချင်ပါပြီ။ ဘို ရှိရာမွေးရပ်မြေကို ပြန်ပြေးချင်စိတ်တွေကို ချုပ်တည်းနေရတဲ့ဘ၀။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ရူးသွပ်သွားပြီလားလို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ခဲ့မိတဲ့ အထိ။ တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ရတဲ့ ဘ၀က ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲ ခုမှပိုပြီးသိလာ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သီဟန်ကို ရင်မဆိုင်ရဲသေးဘူး။ ခွင့်လွတ်ပါလို့ ဘို ကိုမတောင်းပန်ချင်တော့ပါဘူး ။ နားလည်လိမ့် မယ်လို့ပဲ ထင်ထားခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာတွေကို ချွေးသိပ်လို့ နေ့တွေကို ကျော်ဖြတ်ရင်း တစ်ညမှာတော့.
“ဘို..ဘို.. ဘယ်သွားမလို့လဲ။ ဟင့်အင်း လွန်းဆက် ကို ကျောခိုင်းမသွားပါနဲ့။ ဘို ..ဘို..”
ကျွန်မဘယ်လောက်ပဲ အော်ခေါ်နေနေ ကျွန်မကို ကျောခိုင်းပြီးထွက်သွားတယ်။ ရင်ထဲမှာ နာကျင်လိုက်တာ။ ကျွန်မ ကျောခိုင်းခဲ့တုန်းကလဲ ဘိုအရမ်းခံစားရမှာပဲ။ ဒါတောင် ကျွန်မက အိမ်မက် ဘို က လက်တွေ့။ အဲဒီညက တစ်ညလုံး အတွေးတွေနဲ့ စဉ်းစားတယ်။ မနက်ခင်းရောင်နီလာချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပြတ်ပြတ်သားသားချနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရင်ဆိုင်တော့မယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲခက်ခဲ ဘို လက်ကို မြဲအောင်တွဲထားမယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တို့နဲ့ အတူတူ နောက်တစ်ပတ်မှာ ချစ်သော အမိမြေကို ခြေချနင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ထဲကို ခြေလှမ်းအ၀င်မှာ အမေ့ရဲ့ မချိတင်ကဲ ရေရွတ်သံက ကျွန်မအတွက် စီရင်ချက်တစ်ခုလိုပဲ
“သမီးလေး လွန်းဆက်. ဘ၀က ဝဋ်ကြွေးတွေ ကြီးလွန်းတယ် ထင်ပါတယ်ကွယ်။ မနေ့ညက ဘို ရဲ့ အမေက ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ ဘို ဆုံးပြီတဲ့။ အရက်တွေ အလွန်အကျွံ သောက်လွန်းလို့ အသည်းရောဂါနဲ့ ဆုံးရှာပြီ။ ”
ကျွန်မမှာ ငိုစရာမျက်ရည်တို့မရှိ။ ဆို့နစ်နေလိုက်တာ အသံတို့မထွက်။ ငိုချင်ပါလျှက် မျက်ရည်တို့ခန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀။ မပြေးချင်ပါပဲ ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀။ ရပ်တည်စရာမြေမရှိသလိုပဲ။ အမေ့ခေါ်သံလဲ မကြားတော့ဘူး ။ ခြေဦးတည့်ရာကို ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။
“မိသီ.. ညည်း ခုတော့ တော်တော်ပျော်သွားပြီ မဟုတ်လား။ ငါ့သားကိုသတ်တာ ညည်းရဲ့ အတ္တအေ့။ အေး ညည်းရဲ့ ချစ်သူကိုသတ်တာလဲ ညည်းရဲ့ အတ္တမနာလိုဝန်တိုစိတ်ပဲ။ လွန်းဆက် က ကြားထဲက ဓါးစာခံဖြစ်ရရှာတာ။ ကိုယ့်သားသမီးမို့ ငါ့မှာ မပြောရက် မဆိုရက်။ ညည်းနဲ့လွန်းဆက် ငယ်ကထဲကပေါင်းလာခဲ့တာ။ သူဘာကိုကြောက်တတ်တယ် ဆိုတာညည်းသိပြီးသား။ ဒီလမ်းကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာလဲ ညည်းသိပြီးသား။ ညည်းရဲ့ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကို မဖုံးကွယ်နိုင်လို့ မထိန်းနိုင်လို့ အတ္တကြီးလွန်းလို့ ခုတော့အေ ငါ့သားကြီးပါ ဓါးစာခံဖြစ်ရရှာပြီ ”
သီဟန် ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။ အစ်ကို့ကိုပဲ ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကိုရယ်။ သီဟန် အချစ်ကြီးခဲ့လို့ အမျက်ကြီးသွားတာပါ။ သီဟန်ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့။
“အေးဟယ် ကောင်လေးသနားပါတယ်။ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ တော်တော်ချစ်ရှာတာ။ သူ့ညီမကြောင့်လေ”
“ဟုတ်တယ် အဲကောင်မလေးက ရိုင်းတာ။ မောက်မာတယ်။ ခုမှ မျက်ရည်လေးဝဲလို့။ ဟန်လုပ်နေတာ”
အသုဘပို့တဲ့ လူတွေရဲ့ ဝေဖန်နေတဲ့အသံ။ သီလရှင်လေးကြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကတော့ အရင်လို မဟုတ် အေးချမ်းလို့ နေခဲ့ပြီ။ ရဲရဲနီနေတဲ့ မီးသွေးခဲကို အေးမြတဲ့ရေတွေ လောင်းချလိုက်သလို ရှဲခနဲ မီးသေသွားပေမယ့် အပူငွေ့လေး နည်းနည်းတော့ ရှိစဲ။ ဒါပေမယ့် သီလရှင်လေးရဲ့ မျက်နှာကတော့ ကြည်လင်လို့။ မျက်နှာမှာ သောကရိပ်တို့က ဖြတ်သွားလိုက် ပြီး ပျောက်သွားလိုက်။ တော်တော်ကြာကြာ တွေတွေကြီး ဘို ရဲ့ အလောင်းကို စိုက်ကြည့်နေပြီနောက်။ ချာကနဲ တိကနဲ ကျောခိုင်းဖို့ ခြေလှမ်းတို့ လှည့်ထွက်လိုက်တယ်။
နွေခေါင်ခေါင်သုသာန်ကဇရပ်မှာ လေပြင်းတစ်ချက်ဝှေ့ကနဲ။ သီလရှင်လေးရဲ့ ဂတုံးပြောင်ပြောင်ကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ယောဂီသဘက်လေးက အလောင်းရဲ့ မျက်နှာပေါ် လျှောကနဲ ဖုံးအုပ်လို့။ သီလရှင်လေးကတော့ လှည့်မကြည့်တော့ပါဘူး။ သူသွားလိုရာကို လှမ်းထွက်သွားခဲ့ပြီ။
သီလရှင်လေးရဲ့ မျက်နှာကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ သူက သီဟန်။ သီလရှင်လေးဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သီဟန် တစ်ယောက်သာ သိပါလိမ့်မယ်။ လောကကြီးရဲ့ အလှည့်အပြောင်း အကောက်အကွေ့တွေကြားထဲမှာ အလှည့်ကျ ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဆောင်သွားကြရ ရှာတဲ့ သူတို့တွေ။ ငိုသူကလဲ ပီပြင်အောင် ငိုကြ။ နိုင်သူကလဲ ဟားတိုက်ပြီးရယ်မောကြ။ ရှုံးသူတွေကလဲ မျက်နှာအောက်ကြို့လို့။ တစ်ကယ်တော့ လောကဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နေကြရတာချင်း အတူတူ ဘယ်သူ့ ဘယ်သူမှ မသာသလို ဘယ်သူမှလဲ မနိုင်ကြပါဘူး။ အားလုံးတူညီနေ ကြတာကတော့ လောကဓံအထုအထောင်းကို မာန်တင်းလို့ ခံနေကြရတဲ့ ဘ၀တွေပါပဲလေ.
ချစ်စွာသော မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာလို့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။